Ingqwalaselo kwiiNkcukacha zeMveliso ziya kwenza abaThengi baThandwe ngakumbi-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ukuqwalaselwa kweenkcukacha zeMveliso kuya kwenza abaThengi baThandwe ngakumbi
Ixesha: 2021-01-26 I ngxelo: 55
Kwinqaku lokugqibela, sithethe ngomgangatho weemveliso ezimisela ukunyaniseka kwabathengi. Ke ngeli xesha, siza kuthetha ngeenkcukacha zomsebenzi weemveliso. Kukulumka nangononophelo kuphela apho sinokuvelisa iimveliso ezingcono,ukulahla i-agitater, Zonke zicocekile kwaye zintle.
Ukusuka ekuthengweni kwensimbi engama-304, ukuya kwinkqubo yemveliso, ukuya kuhlolwa kweemveliso ezigqityiweyo, ngaphandle kokukhetha, ayizizo ezokugqibela kwimveliso.Yaye wonke umthengi aqiniseke ngomgangatho weemveliso zeCOFF.
Yonke inkqubo, yonke into eneenkcukacha zemveliso, siya kuyinika umthengi ngamnye ukuba a-odole, ukuze bazive benovelwano kwaye sikunye kwimveliso yeemveliso zabo, siqiniseke ukuba siyazithenga iimveliso.
Previous: Uhla loNyaka oMtsha
Okulandelayo: Ukunyaniseka kwaBathengi kuxhomekeke kuMgangatho weMveliso